I-Minecraft Modding: Uyenza njani i-Arena esisiseko kunye nocingo lweMonster Arena
NguSarah Guthals, uStephen R. Foster, uLindsey D.Handley
Xa usakha nawuphi na umdlalo weMinecraft, into yokuqala oyifunayo yindawo esisiseko yomdlalo. Kwi-Monster Arena, ufuna indawo enkulu, evaliweyo. Oku kubonisa uhlobo lwemidlalo oyakhayo- iqonga elikhulu, elijikelezayo elineradiyo yeebhloko ezingama-20. Ibala elijikelezileyo luthango oluqiniswe ngamatye. Ucingo luyafuneka ukuze kungabikho monsters okanye umdlali angashiya ibala kumdlalo wonke.
Njengoko sele ufundile kwiklasi yejiyometri, i irediyasi ngumgca osuka embindini wesangqa ukuya kulo naliphi na icala elisecaleni lesangqa. Ngenxa yokuba yonke into eMinecraft yenziwe ngeebhloko, ubala iibhloko phakathi kweziko kunye nomda wesangqa, kwaye leyo yiradiyo.
Indawo yokuqala ayisiyohlobo lokugqibela. Ungasoloko ulungisa kuyilo. Injongo yokwenza indawo yokuqala kukuba nendawo esebenzayo yokudlala umdlalo kunye nokugcina umdlalo ngaphakathi kule ndawo. KwiMonster Arena, umdlali ufuna
Indawo yomdlali kunye ne-monster yokubaleka
Indlela yokuqinisekisa ukuba izilo kunye nomdlali abanako ukushiya loo ndawo
Kule ndawo esisiseko, uyila
Apha, ungasebenzisa imiyalelo yeWorldEdit ukwenza ibala lemidlalo kwiLearnToMod.
UKUYA Ukuhlelwa kwehlabathi Umyalelo yinto enye onokubaleka kuyo iMinecraft ukuhlela umhlaba, njengokwenza amawaka eebhloko avele ngaxeshanye. Ungaphonononga uninzi lwe-WorldEdit command kwi-Intanethi-khangela ixesha I-minecraft indibaniselwano co m iimitha usebenzisa injini yokukhangela oyithandayo.
Ndwendwela esemthethweni WorldEdit wiki ukubona uluhlu lwayo yonke imiyalelo ye-WorldEdit yeMinecraft. Cofa nje kwelinye lamakhonkco kudidi, njengokugcwalisa imingxunya phantsi kwee-Utilities ukufumana imiyalelo ye-WorldEdit ehambelana nemingxunya yokugcwalisa.
Ukwenza ibala lesetyhula, kufuneka wenze isilinda kunye nesangqa, onokuyifumana phantsi kohlobo lweGeneration kwi-wiki (ijonge ezantsi).
Lo mfanekiso ubonisa indlela yokusebenzisa imiyalelo ye-WorldEdit kwi-Minecraft. I-WorldEdit iyalela ukusebenzisa ii-algorithms (enye indlela yokuthetha uluhlu lwamanyathelo) ukwenza isiphumo kwihlabathi leMinecraft. Ivela kwi iphepha le-wiki malunga nemiyalelo ye-WorldEdit .
Uvavanyo lwe-WorldEdit luyalela kwi-Minecraft
Ngaphambi kokubhala ikhowudi yokwenza i-arna, vavanya imiyalelo ye-WorldEdit eMinecraft.
Yile ndlela yokwenza iqonga elenziwe ngamatye kunye nerediyo engama-20.
Eli liqonga elenziwayo.
Xa uzama ukwakha isakhiwo esikhulu, cofa kabini kwindawo yesithuba ukuhambisa phezulu, emva koko ucofe kwaye ubambe isithuba ukuze unyukele esibhakabhakeni ngaphambili ukuqhuba imod yakho. Eli nyathelo lenza iqonga elikhulu esibhakabhakeni kwaye lenze kube lula ukubona.
Unokuvavanya ukwenza ucingo. Le yindlela yokwenza ucingo lwamatye.
Iziphumo zokungeniswa kwakhona
Ukuba awushukumi, ungawunika lo myalelo wokwenza ucingo lwamaplanga ngaphakathi kocingo lwamatye.
Inje le ifana nocingo.
Ukuba uhamba emva kokuba udale iqonga kwaye ngaphambi kokuba wenze ucingo, ucingo lwakho aluyi kulunge ngokufanelekileyo kwiqonga. Ungazama ukuzama ukubona ukuba kwenzeka ntoni: Sebenzisa umthetho weqonga ukusuka phezulu kwaye uye phambili ude ube kufutshane neziko leqonga. Emva koko sebenzisa umyalelo wokwenza ucingo.
Ukuba ubiza yomithathu le miyalelo ye-WorldEdit ngaphandle kokuhamba, wenza i-arna enocingo olujikelezileyo.
C ukuvuma ikhowudi ithetha ukuba iMinecraft inakho ukuwenza loo msebenzi.
Imodyuli yemidlalo kwiLearnToMod
Emva kokuba uvavanye imiyalelo ye-WorldEdit, ungabatsalela umnxeba ukusuka kwi-LearnToMod mod!
I-skyla iud iziphumo ebezingalindelekanga zehomoni
Ukutsalela ii-WorldEdit Commands kwi-LearnToMod, kuya kufuneka usebenzise ifayile ye-Yenza uMyaleloibhloko, enokufumaneka phantsi kodidi lwaBadlali.
Xa usebenzisaYenza uMyaleloibhloko, uphawu lokuqala lwe-slash (/) sele ifakiwe, ke kuya kufuneka ube nenqaku elinye kuphela lokwenza iqonga kunye neengcingo. Lo mfanekiso ukubonisa ukubaephambiliUmsebenzi ujongeka njengendawo yokuqala.
Vavanya imodyuli yakho ukuze uqiniseke ukuba iziphumo zikolo hlobo lwearna iboniswe apha ngasentla.
yintoni enye kunye nesininzi
Ngaba i-pc yam iyayixhasa iBluetooth
I-levothyroxine sodium 50 mcg
char uluhlu c ++
ukubeka iliso kwangaphandle kwifowuni ye-android